Muzvare Khumalo, avo vanomirira Bulawayo East muNational Assembly, vasungwa pamwe chete nemurongi wemisangano muBulawayo, Amai Helen Mpofu, VaElliot Mujeri, VaTinashe Matimbure, Meli Sithole, Shelton Tembo nemumwe mutsigiri watisina kuziva zita rake.
Vanomwe ava vambochengetedzwa nemapurisa epakamba yeTshabalala.
Vasungwa ava vazoendeswa kukamba huru yemapurisa yepaBulawayo Central Police Station.
Studio7 yaedza kunzwa kumutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyathi, kuti tinzwe zvikonzero zvasungirwa vanhu ava, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights, ayo ari kumirira nhengo dzeMDC dzasungwa idzi, anoti Muzvare Khumalo nevamwe vavo vari kupomerwa mhosva yekuburitsa manyepo zvichitevera mashoko ari kushambadzwa pasi pehurongwa hweFree Zimbabwe Campaign.
Gwaro rinonzi ndiro rasungisa Muzvare Thabitha Khumalo nevamwe vavo
Mutauriri weMDC mudunhu reBulawayo, VaSwithern Chiroodza, vanoti ichokwadi kuti Muzvare Khumalo vasungwa.
VaChiroodza vanoti mapurisa ambosvikawo pamuzinda wemahofisi avo muBulawayo, vachiti izvo zvinoratidza kuti pane zvaari kuda kuita kubato ravo iro rine hurongwa hwekuratidzira muBulawayo nemusi weMuvhuro.
Hurukuro naVaSwithern Chiroodza